Chrome Canvas no fampiharana vaovao an'i Google hisarika ny rahona | Famoronana an-tserasera
Fampiharana tranonkala iray hafa, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nentin'i Google ary niantso ny Canvas. amin'ny Canvas dia afaka manao sary haingana sy ireo doodle isika hiezaka haneho hevitra, hevitra na hamorona ny tabilao fandaminana momba izay ho fikambanana na orinasanay.
Chrome Canvas dia rindrambaiko iray mandroso izay nandefa ny G lehibe omaly ary vitantsika izany fidirana amin'ny browser rehetra. Na dia tadidinao aza herinandro vitsivitsy lasa izay, Google mihitsy no nitondra Squoosh, fampiharana tranonkala iray hafa hanefena sary ary noho izany dia ento any amin'ny tranonkalantsika izy ireo nefa tsy milanja kilobytes.
Amin'ny fotoana voalohany azonao atao ampifandraiso amin'ny Chrome Canvas ny kaonty Google anao, mba hahafahanao miverina any amin'ny galerie amin'ny fotoana rehetra ary miditra amin'ny saryo ny sary. Ity dia iray amin'ireo lafiny tokony ho raisina amin'ity fampiharana ity.
Ny fitaovana dia 5: pensilihazo, tsaoka, penina, marika ary famafana. Izy ireo dia misolo tena ny sarin'izy ireo amin'ny ilany havia amin'ny efijery ary hita eo ambanin'ny mpamaky miloko misy loko tsy misy dikany sy ny fahaizana mamorona antsika manokana namboarina.
Ao amin'ny tapany ambony dia azontsika atao ny manondrana ny sary ka andao ampidirina amin'ny endrika PNG. Ka tonga lafatra daholo ho an'ny rindranasa intuitive be azo ampiasaina haingana. Hiankina amin'ny fitaovana ampiasanao azy io ahafahanao miasa tsara kokoa miaraka aminy; Hafa mihitsy ny fampiasana ny totozy hisarihana fa tsy ny rantsan-tànanao eo amin'ny efijery findainao na tablette.
Chrome Canvas dia rindrambaiko amin'ny Internet, toy ny FontSpark, ary tonga io vahaolana tonga lafatra io ho an'ny finday na tablette sary izay nampifandraisintsika tamin'ny port USB an'ny solosaina finday na PC anay. Aza mandany ny fotoananao ary avy eo efa ho an'ny rohinao hitsapana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Canvas dia fampiharana Google vaovao momba ny sary haingana sy ny fanoratana